Marka waxaad ku dhaqaaqi kartaa boodbood weyn PUBG Mobile | Androidsis
Waxaan dhawaan sharaxnay sida loo sameeyo shabeelka ayaa ku boodboodaya PUBG Mobile, farsamo aad u yaab badan oo in yar yaqaana oo garanaya sida loo sameeyo, maxaa yeelay ilaa dhowr casriyaad ka hor ayaa lagu fulin karaa qaab ka duwan, kaas oo aan lagu fulin karin waqtigan.
Hadda waxaan ku baraynaa inaad sameyso nooc kale oo bood ah, mid xoogaa caadi ah, laakiin ka weyn midka aan sida caadiga ah ku qabanno kaliya taabashada batoonka boodka, wax faa'iido u yeelan kara in ka badan hal munaasabad oo lagu boodo darbiyada ama caqabadaha kale ee ciyaarta .
Marka waxaad ku dhaqaaqi kartaa boodbood weyn PUBG Mobile
Si tan loo sameeyo "Super bood" laba badhan waa in isla mar la wada riixaa. Kuwani waa bood oo foorara. In kasta oo ay inta badan adag tahay in iyaga la isku riixo isla markaa, taas oo keeneysa in dabeecadda ay si fudud u booddo ama u foorarsato, dhowr jeer oo isku day ah ayaad xawaare ku kici doontaa
Mararka badankood marka boodkan weyn la sameeyo, astaantu waxay ku dhammaataa foorarsiga. Intaas waxaa sii dheer, si aad u sameyso waa inaad dhaqdhaqaaq ku jirtaa, doorbidayaa markaad socotid, in kasta oo sidoo kale la samayn karo markaad weli tahay.
Sidoo kale waa suurtagal in tan lagu sameeyo badhanka fuulista, kaas oo buuxin lahaa isla doorka badhanka boodka. Tani, haddii ay dhacdo inaad firfircooni geliso oo aad dhigto aag raaxo leh si aad ugu riixdo kan foorarsanaya. Adigoon ku sii dheerayn, maahan inaad wax badan sameyso si aad uga dhigto boodboodka caanka ah ee PUBG Mobile.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso casharradan soo socda ee ku saabsan dagaalka royale ee aan horay u soo daabacnay:
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida loo sameeyo super boodboodka PUBG Mobile
Huawei wuxuu bilaabayaa qaybta dhexe ee Nova 7 SE Vitality Edition: astaamaha, qiimaha iyo helitaanka